Izinhlobo Ubumnene, izici zokuziphatha kwabantu
Ngamunye wethu uhlukile futhi ngabanye. Sonke uzizwe udabukile lapho enesizungu, behleka izikhathi zenjabulo futhi izinyembezi lapho lizothola entabeni. Nokho, siyazi ukuthi abantu abahlukile kungase kudingeke ngezindlela ezahlukene kakhulu nokusabela ezintweni ezenzeka ngaphandle. Othile, isibonelo, ngokuphelele ngomoya ophansi iphendula amazwana nezingahlobene nendaba, futhi othile akusho ukwamukela ukugxekwa. Othile iyakumhleka, ebeyindandatho esimweni silly, futhi umuntu uzizwa kabi. It luncike uhlobo Ubumnene, onikelwa kuye Mother Nature kusukela ekuzalweni. Kuyaziwa ukuthi Ubumnene luthathwe. Ngakho njalo wethu "lonke kayise, abanenkani efanayo," "bonke unina, njengokuya ezitolo."
Ubumnene - isici esikhethekile psyche womuntu, okutshengisa Dynamics umsebenzi sakhe sengqondo. Esinye isazi sefilosofi esingumGreki UHippocrates, owaphila eminyakeni engaba ngu-480 BC, ukubonakala 4 izinhlobo Ubumnene. odokotela bengqondo Modern bathole observation ezithembekile usosayensi, ngakho namanje uyayethemba le ngezigaba, leseyifinyelele izinsuku zethu umsulwa.
Ngokusho Ukwahlukaniswa uHippocrates lezi zinhlobo ezilandelayo senhliziyo: sanguine, phlegmatic, choleric, melancholic. Indoda uhlobo sangvinisticheskim yesimo senhliziyo livulekele bonke entsha, kulula ukuthola ulimi abafana ngayo nabanye abantu, ngokushesha uvuma ezinhlotsheni izinguquko. Ubona sanguine e ngokwenama yakhe, isimo sengqondo esiqondile; uthi ngokuvamile ngokushesha, ngokushesha basabela ezintweni ezenzeka ngaphandle. Ukuba nombono ophambene akuyona esingokwemvelo kule uhlobo lwabantu, basheshe ukuthola ukusuka ukwehluleka emsebenzini nasekuphileni kwakhe siqu futhi futhi odlula ngesibindi kwalasha zokuphila.
Phlegmatic ezahlukene uhlamvu olinganiselayo nokuzola, uyephuza, njalo kanye nama-practical. Ezinye izinhlobo Ubumnene womuntu sihluke ukuhamba phlegmatic okukhulu, zabanikazi lula kakhulu lokuzivumelanisa nokushintsha. Phakathi izimfanelo ezinhle siqu phlegmatic - ukuzibamba, yokucabanga ukujula, ubambe, phakathi negative - ubuvila olungenamkhawulo, ukungabi imizwelo. Ngisho nalapho phlegmatic kubi, ngeke uhlele hysterics, zamemeza nje uya uqobo.
Awomculo we-Melancholic izwele kakhulu futhi kalula kabi, libhekene manqikanqika neyokwesaba. Wayevame nesizotha, ungalokothi kuthatha isikhundla. Isici melancholic uhlobo ubuntu kuyinto ukujula emhlabeni kwangaphakathi okungavamile. Abantu abanjalo babe creative ingqondo, kungaba abangaphansi ezinhle emsebenzini, abafundi abakhuthele esikoleni. ukwehluleka Life futhi ngamashwa aphenduke melancholic endaweni tedium njalo elalimbelesele kokuba awanelisekile ngezimpilo zabo.
Choleric ngokomzwelo, uhluthuke, ongenakulinganisela. Ngokushesha wafutheka mayelana futhi akukho, futhi ngokushesha ngakho uthulisa phansi. Umuntu lolu hlobo Ubumnene, izisethile umgomo lungafinyeleleki futhi njalo ephumelelisa kubo, ngisho noma umsebenzi kumele "ukugqoka." Phakathi ezimfanelweni ezinhle choleric - ubuqotho, ukubekezela, gxila imiphumela.
Umuntu angeke alithole ukuqokomisa izinhlobo noma engcono lalibhekisela Ubumnene. yilowo nalowo abekwa ezinhle nezimbi. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi kule nqubo ukuthuthukiswa zobuntu bakhe iyona engcono ubonakalisiwe, futhi embi kunazo zonke esebohlile ubala. Zonke izinhlobo Ubumnene zihlukile bodwa, kodwa odokotela bengqondo yesimanje sithambekele bathi okwamanje kukhona nhlobo evelele choleric, phlegmatic, nokunye. Man ezinkathini ezihlukahlukene zokuphila angawahlanganisa womabili kuqiniswa ngokomzwelo nokuzola. Ngaphezu kwalokho, umuntu njalo ekuthuthukisweni. Yini namuhla kubonakala funny kakhulu futhi bezijabulisa, kungase kubonakale silly futhi ungakujabulisi ngonyaka. Lokhu akusho ukuthi uhlobo Ubumnene angashintsha ngesikhathi. Wonke umuntu endaweni ukuba ilungelo zonke izinhlobo Ubumnene. Ezinye zazo yilezi ephezulu, abanye mancane evelele. Ngokwesibonelo, ngisho nakancane abangaphansi ikhanda engacabanganga yendlu kungaba soft kakhulu futhi nezimo, futhi izingane ngaso sonke isihawu. Okunjalo ukuziphatha umuntu ubonisa ngqo inhlanganisela okungenani ezimbili izinhlobo Ubumnene kumuntu oyedwa.
Izinhlobo ubuholi kanye nezici zabo
Uyini CPD emaphoyiseni? sokuqonda CPP
Kuyini lenani Psychology yokuxhumana?
"Anginayo enye," noma ingane mayelana sokuba wedwa
Imidiya bese osetshenziswayo Psychology
Lokho imidwebo okungalindelekile zingalandisa ubuntu bakho?
Ziyini izitayela zangaphakathi? Incazelo emfushane
Caviar enesitshalo seqanda esimnandi kule "Panasonic" ye-multivariate: kanjani ukupheka?
Ukuhlaziywa kwe "Mtsyri", izinkondlo zikaMikhail Lermontov
Kanjani amandla bluetooth ngelephuthophu. Amathiphu ambalwa elula
Kungani ukudlidliza lapho uvula amanzi kampompi: izimbangela futhi ukuxazulula le nkinga
Zezinwele for ucingo zokugcina: izitayela fashion 2012
Saw Isiyingi "Interskol DP-1600": izici, isiqu, ukubuyekezwa
Yenza kusebenze ibhuloho inethiwekhi
Ulimi-Mongolian: izici, izici, amazwi
Konke mayelana izinwele "curls ohlangothini"
Indlela ukupheka ase inyama noma inyama yenkukhu
Simple Yethula: ukusetshenziswa ngolimi lwesiNgisi, ngokuvamile izibonelo